Hoy i Jesosy: Izaho no fahamarinana - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Hoy Jesosy: Izaho no fahamarinana
Moa ve ianao tsy maintsy namariparitra olona iray fantatrao ary sahirana tamin'ny fitadiavana ny teny mety? Efa nitranga tamiko izany ary fantatro fa efa nitranga tamin'ny hafa koa izany. Isika rehetra dia manana namana na olom-pantatra izay sarotra ambara amin'ny teny. Tsy nanana olana tamin’izany i Jesosy. Nazava sy mazava foana izy, na dia ny fanontaniana hoe "Iza moa ianao?" mamaly. Tiako indrindra ny andalan-teny iray izay lazainy ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona hoe: «Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako” (Jao. 14,6).
Ity fanambarana ity dia mampiavaka an'i Jesosy amin'ny mpitarika rehetra ny finoana hafa. Ny mpitarika hafa dia nilaza hoe: "tadiaviko ny fahamarinana" na "Mampianatra ny fahamarinana aho" na "mampiseho ny marina aho" na "Mpaminany ny fahamarinana" aho. Tonga Jesosy ary nilaza hoe: «Izaho no fahamarinana. Ny fahamarinana dia tsy fitsipika na hevitra manjavozavo. Ny marina dia olona ary izaho izany olona izany. »
Eto isika dia tonga amin'ny teboka lehibe. Ny famonoana toa an'io dia manery antsika handray fanapahan-kevitra: raha mino an'i Jesosy isika dia tsy maintsy mino izay rehetra lazainy. Raha tsy mino azy isika dia tsy misy dikany ny zava-drehetra, dia tsy mino zavatra hafa nolazainy isika. Tsy misy ambanimbany. Na Jesosy dia ny fahamarinana ao anaty ary milaza ny marina izy, na izy roa ireo dia diso.
Izany no tena mahafinaritra: mahafantatra fa izy no fahamarinana. Ny fahafantarana ny marina dia midika fa afaka matoky izay lazainy manaraka aho: “Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo.” (Jaona. 8,32). Mampahatsiahy antsika izany i Paoly ao amin’ny Galatianina: “Kristy efa nanafaka antsika ho afaka”. (Gal. 5,1).
Ny fahalalana an'i Kristy dia midika hoe mahafantatra fa ny marina ao aminy ary afaka isika. Malalaka alohan'ny fitsarantsika ny fahotantsika ary afaka mitia ny hafa amin'ny fitiavana radikaly izay nasehony tamin'ny mpiara-belona taminy isan'andro isan'andro tamin'ny fiainany tety an-tany. Malalaka amin'ny fahatokisan'ny fanjakany isika mandritra ny fotoana rehetra ary amin'ny zavaboary rehetra. Satria fantatsika ny marina, dia afaka matoky azy isika ary miaina araka ny ohatr'i Kristy.